Caadi ahaan: Muxuu Maqaado Mawduuca? 4 Noocyada Macluumaadka Webka ee Isku Wareegta Shabakada
qalab. Inta badan websaydhiyaadka iyo bloggers waxay ilaaliyaan waxyaabaha ay ka haystaan ​​shuruucda xuquuqda lahaanshaha, iyo soo dhejinta macluumaadka la xaday sida asalka hore waa dembi halis ah!
Nasiib darro, nuxurka bogga intarnetka ayaa badanaa la xoqay ujeedooyin aan suurtagal ahayn oo sharci darro ah sida basaasiin warshadeed, qashqashaad, iyo xatooyada xogta. Si kastaba ha ahaatee, ujeedooyinka sharciga ah iyo kuwa asaliga ah ee xoqidda macluumaadka waa macluumaadka gelitaanka, maareynta nuxurka, hijrada xogta, sirdoonka tartanka, maaraynta sumcad ama falanqaynta ganacsiga.
Noocyo afar nooc oo kala duwan oo laga helo internetka:
Qaar ka mid ah websaydhiyaadka iyo bloggers waxay isticmaalaan bogaga internetka iyo blogska sumcad leh, iyaga oo tixgelinaya in kor loo qaado buugga boggooda boggooda darajooyinka mashiinka. Dhab ahaantii, wax kasta oo ah mawduuc ayaa u nugul yahiin xoqista, laakiin afarta nooc ee ugu muhiimsan ee la xoqay ayaa lagu sheegay hoosta.
1. Daabacayaasha Digital iyo Wakaaladaha:
Daabacayaasha Digital iyo buug-internetka ayaa badanaa bartilmaameedsanaya barnaamijyada iyo horumariyeyaasha, kuwaas oo ujeedadoodu tahay inay xoqaan macluumaadka ka dhexjirta boggagooda gaarka ah. Yell. com tusaale waa tusaale ahaan. Bixiyahan adeegga internetka ee caalamiga ah iyo buugta internetka ayaa ku guuleystay bilihii ugu dambeeyay. Waxyaabo badan oo ku jira boggan ayaa la tuuray, iyo spammers had iyo jeer waxay raadiyaan siyaabo badan oo lagu xoqayo boggooda. Sidoo kale, Manta waa website-ka caanka ah halkaas oo in ka badan 20 milyan oo magacood ah ay isu diiwaan galiyaan ujeedooyin suuq ah. Nasiib darro, badankeeda ayaa la jarjaray, tiro badan oo qashin ayaa loo isticmaalay ujeedadaas.
2. Guryaha Guryaha:
Dhowr sano ka hor, hay'adaha guryaha ee mulkiilayaasha ayaa soo weeraray qodobka miisaanka, iyo dib u soo kabashada waxay ku kacday in ka badan 10 milyan oo doolar.
Waxay u egtahay mid ka mid ah dhamaanba dhammaan safarada socdaalka. Shirkadahaasi ma aha oo kaliya inay bixiyaan macluumaad ku saabsan meelaha ugu wanaagsan adduunka laakiin sidoo kale waxay u fidiyaan adeega safarka macaamiishooda. Goobaha safarka ayaa ah bartilmaameed sahlan oo ah waraaqaha wax lagu qoro. Qaar ka mid ah hay'adaha internetka ee ugu khatarsan ee khatarta ku jira ayaa ah Kayak, TripAdvisor, Priceline, Trivago, Expedia, iyo Hipmunk. Waxay dhiseen ganacsiyo badan oo malaayiin doolar ah oo macaamiil ah, waxyaalahooga badanaa waa la tirtiray oo dib loo isticmaalay shabakadaha internet-ka yar iyo blogyada.
Waa run in mowqifka e-ganacsiga aan si sahlan loo tirtiri karin, laakiin bogagga internetka sida eBay iyo Amazon ayaa weli lagu xoqay sharaxaadda qiimaha iyo wax soo saarka Source .